Baadhitaanka cudurada galmada | Zanzu
Baadhitaanka si loo hubiyo haddii qof uu qabo caabuqyada galmada la isugu gudbiyo (STI). Dhakhtarku waxa uu waydiiyaa su'aalo oo waxa uu baadhaa xubnaha taranka, afka iyo wakhtiyada qaarkood futada. Dhakhtarku waxa uu qaataa cudbi goos ah meelaha laga yaabo inaycaabuq leeyihiin, qaadaadhiig ama waydiiyaa qofka inuu ku kaajo dhalo. Dhakhtarku waxa uu u diraa dhammaan muunadaha xafa shaybaadhka si in dheeraad ah loo baadho.
Dhakhtarka daweeya kaadi mareenka